Fivarotan-tena amin’ny Internet Vehivavy roa no voasambotra teny Ambanidia
Andapa Tsy mitombina ilay “halatra taova”
Mihidy mialoha ny amin’ny 9 ora alina ny toeram-pisotroana, mitohy ny fanentanan’ny manampahefana any Andapa fa tsy mitombina ny feo niely tamin’ny tambajotran-tserasera mahakasika ny
AMBATONDRAZAKA Lehilahy mpanao biriky maty nilatsaham-baratra
Teo am-panaovana biriky no nilatsaham-potaka ny raim-pianakaviana iray ka maty tsy tra-drano, tao Didy Ambatondrazaka.
Nanatanteraka fampilazana fa mandray mpiasa vavy ny toerana iray teny Miandrarivo Ambanidia, kinanjo mampitanjaka olona ho hita amin’ny solosaina no ataony.
Vehivavy roa no voasambotry ny mpitandro filaminana izay atidohan’ny fanaboridanana zazavavy tsy ampy taona eo anatrehan’ny “webcam” hozahan’ireo lehilahy teratany vahiny any ivelany, afak’omaly. Maro no diso fanantenana raha nitady asa ka nitaraina tamin’ny manampahefana. Nanatanteraka ny vela-pandrika ary ireo miaramilan’ny zandary ka tra-tehaka tamin’io fampanaovana fihetsika mamoafady io ireo vehivavy ireo. Eo am-panatanterahana ny famotorana sy ny fanadihadiana lalina ny mpitandro filaminana eto am-panoratana ny vaovao.
Ankoatra ny teny Andoharanofotsy, nitranga indray ity ny teo Ambanidia, izay samy eto an-drenivohitra. Azo heverina fa mbola misy toeran-kafa ankoatra ireo ka miandrandra fampitam-baovao hatrany ny mpitandro filaminana ho fiarovana ny maha olona sy zon’olombelona izay manan-kasina fa tsy mitovy amin’ny entam-barotra hafa. Heverin’ny mpanara-baovao fa tsy vitsy no mampiasa ny fandrosoana, indrindra ny nomerika sy ny fivoaran’ny teknôlôjia amin’ny fomba ratsy sy mamoafady toy izao.
Manana adidy amin’ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena amin’izany ny fitondrana izay mijoro, torak’izany koa ny lafiny fanabeazana fa tsy faly mizara “tablette” ho an’ny mpianatra fotsiny. Araka ny fanentanan’ny polisim-pirenena hatrany, andraikitry ny ray aman-dreny ny zaza tsy ampy taona, tsy voatery ny fanaraha-maso amin’ny tambazotran-tserasera amin’ny finday ihany no iantsorohan’izy ireo fa ny any ivelan’ny tokantrano toy izao karazana asa mamoafady izao koa.